ဖာနန်ဒက်နဲ့ နီဗက်တို့ရဲ့ ပေါ်တူဂီ အတွဲအဖက်ကို မန်ချက်စတာမြေမှာ မြင်ရတော့မှာလား…. – Sport Gaber
ဖာနန်ဒက်နဲ့ နီဗက်တို့ရဲ့ ပေါ်တူဂီ အတွဲအဖက်ကို မန်ချက်စတာမြေမှာ မြင်ရတော့မှာလား….
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီးအသင်း တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဝုဗ်အသင်းရဲ့ ပေါ်တူဂီ ကွင်းလယ်လူ ရူဘင်နီဗက်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ စတင်ခဲ့ကြောင်း နာမည်ကြီး သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
အသက် ၂၄နှစ် အရွယ် ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ရူဘင်နီဗက်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲလို အဆင့်မြင့် ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ရောက် ကစားချင်တာကြောင့် အသင်းပြောင်းခွင့် တောင်းခံထားတဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်ပြီး ဝုဗ်အသင်းကလည်း သင့်တော်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးသာ ရရှိပါက သူ့ကို ရောင်းချဖို့ သဘောတူထားပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ယခုနှစ် နွေဈေးကွက် မပိတ်သိမ်းမီမှာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းကို ထပ်မံ အားဖြည့်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ ရူဘင်နီဗက်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး သတင်းဌာန တခု ဖြစ်တဲ့ 90 Min သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရူဘင်နီဗက်ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် အမှန်တကယ် ကြိုးပမ်းနေပြီး ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ခေါ်ယူနိုင်မလား ၊ မခေါ်ယူနိုင်ဘူးလား ဆိုတာဟာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာမယ့် ကစားသမားတွေ အပေါ် မူတည်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမား ဂျက်ဆီ လင်ဂတ်ကို ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး လင်ဂတ်ရဲ့ တန်ကြေးကို ပေါင် ၂၀သန်း သတ်မှတ်ထားကာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းက လင်ဂတ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ညနေခင်းသတင်းဌာနကလည်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နီဗက်ကို ခေါ်ယူဖို့ စတင် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး အကယ်၍ လင်ဂတ်ကိုသာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၀သန်းနဲ့ ရောင်းချဖြစ်ပါက နီဗက်ကို ပေါင် ၃၅သန်း ဝန်းကျင် ပေးချေကာ ခေါ်ယူဖို့ အသင့် ရှိနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မပါတဲ့ ဟက်စကီးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် Top4ခန့်မှန်းချက်
ပေါ့ဂ်ဘာကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား…..